Tsy afaka manokatra ireo singa Outlook manokana rehefa tsy an-tserasera.
Home Products DataNumen Exchange Recovery Tsy afaka manokatra ireo singa Outlook manokana rehefa tsy an-tserasera
Tsy afaka manokatra entana manokana raha toa ka ivelan'ny fomba ivelany ny Outlook
Tsy azonao atao ny manokatra entana manokana ao fampirimana ivelan'ny seranana (.ost) fisie, rehefa miasa ivelan'ny Internet i Outlook.
Ity lesoka ity dia mitranga rehefa ny OST simba na simba ny fisie.
Mba hamahana ity lesoka ity sy hisorohana ny fahaverezan'ny angona dia ataovy izao manaraka izao:
Akatona ny Microsoft Outlook sy ny rindranasa hafa mety hiditra amin'ny OST hametraka.
Find the OST rakitra izay mahatonga ny lesoka. Azonao atao ny mamaritra ny toerana misy ny rakitra miorina amin'ny fananana aseho ao amin'ny Outlook. Azonao atao koa ny mampiasa ny Mitady miasa ao amin'ny Windows hikarohana ny OST hametraka.
Avereno indray ireo angona ivelan'ny Internet ao amin'ny OST hametraka. The Exchange OST Ny rakitra dia misy tahiry ivelan'ny seranana, ao anatin'izany ny hafatra mailaka sy ny zavatra hafa rehetra, ao amin'ny boaty mailakanao Exchange izay tena manan-danja aminao. Mba hamerenana sy hanavotana ireo angona ireo dia tsy maintsy atao izany fampiasana DataNumen Exchange Recovery hijerena ny OST rakitra, avereno ny angon-drakitra ao anatiny, ary tahirizo ao anaty rakitra Outlook PST tsy misy hadisoana mba hahafahanao miditra amin'ireo hafatra sy zavatra rehetra miaraka amin'i Outlook mora sy mahomby.
Ampidino am-boalohany ny tany am-boalohany OST hametraka. Ho fitsinjovana ny filaminana dia aleo averinao alefa.
Ovao ny anarana na hamafana ilay tany am-boalohany OST hametraka.
Amboary ny lesoka. Hamarino tsara fa marina ny fikirakirana kaonty mailaka ao amin'ny Outlook, ary afaka mifandray tsara amin'ny mpizara Exchange anao i Outlook. Avy eo restart Outlook ary andefaso / raiso ny mailakao amin'ny boaty mailaka Exchange mifandraika amin'izany, izay hamela an'i Outlook hamorona vaovao OST manaova rakitra ho azy ary ampifanaraho amin'ny boaty mailaka Exchange raha tsy mandeha io fomba io dia tsy marina ny mombamomba anao ankehitriny, tokony hamafana izany ianao ary hamorona vaovao, toy izao:
6.1 Akatona ny Microsoft Outlook.
6.2 Tsindrio Start, ary tsindrio avy eo Takelaka fikirakirana.
6.3 Tsindrio Mivadika amin'ny Jery Klasika raha mampiasa Windows XP na kinova ambonimbony kokoa ianao.
6.4 Tsindrio indroa Mail.
6.5 Ao amin'ny Fametrahana mailaka fanovozan-kevitra, tsindrio Asehoy ireo profil.
6.6 Misafidiana iray amin'ireo mombamomba diso ao amin'ilay lisitra ary kitiho Esory mba hanesorana azy.
6.7 Avereno ny 6.6 mandra-pikatsoan'ny mombamomba anao tsy mety rehetra.
6.8 Tsindrio Add mamorona profil vaovao ary manampy kaonty mailaka arakaraka ny fipetrany ao amin'ny mpizara.
6.9 A.tart Outlook ary avereno ampifanaraho ny boaty mailakanao Exchange, ho hitanao fa nanjavona ilay olana.
Ampidiro ao amin'ny dingana 3 ny angona. Aorian'ny anao OST Voavaha ny olan'ny rakitra, tazomy ilay vaovao OST fisokafana ny boaty mailaka Exchange, ary sokafy ny rakitra PST novokarina tamin'ny dingana 3 miaraka amin'i Outlook. Satria mirakitra ny angon-drakitra voaverina rehetra ao amin'ny tany am-boalohany OST rakitra, azonao atao ny maka tahaka ireo zavatra ilaina amin'ny vaovao OST fisie raha ilaina.